HBO kwadoro ụbọchị nke oge ọhụrụ nke Egwuregwu nke n'ocheeze na ọnụ ọgụgụ nke isi | Akụkọ akụrụngwa
HBO kwadoro ụbọchị nke oge ọhụụ nke Egwuregwu nke n'ocheeze na ọnụ ọgụgụ nke isi
Ọ bụghị ogologo oge gara aga ka HBO na nnukwu igwe onyonyo rụchara nke isii nke Egwuregwu ocheeze, usoro ihe onyonyo nke televishọn dabere na saga edemede ama ama nke abụ nke Ice na Fire, nke George RR Martin kere. Nke a n'ezie akwụsịghị asịrị banyere oge ọhụrụ, nke asaa, na ugbu a, agbụ ndị America chọrọ ikwenye.
Na eziokwu bụ na ozi ọma adịghị agba ume ma ọlị, ebe ọ bụ na Iji nwee ike ịnụ ụtọ oge ọhụụ nke Egwuregwu n'ocheeze anyị ga-echere ruo oge ọkọchị 2017 ma anyị ga - enwe ike ịnụ ụtọ isi asaa, dị ka ozi sitere na HBO.
Ihe kpatara ihe kpatara igbu oge na iru obere ihuenyo maka oge ọhụrụ metụtara igbu oge na ndekọ nke ngosipụta n'ihi ọnọdụ ihu igwe. Ọ bụ mmadụ ole na ole kwenyere na nke a bụ isi nsogbu bụ na oge nke isii nke egwuregwu nke ocheeze amaliteworị na akụkụ nke akwụkwọ nke Abụ nke Ice na Fire nke ahụbeghị ọkụ ahụ.
Ifufe nke oge oyi bụ akwụkwọ nke isii na akwụkwọ edemede saga ruo mgbe ọ dị n'ahịa usoro ahụ yiri ka ọ dị ntakịrịTụkwasị na nke ahụ, na-enweghị ụbọchị a kara aka maka akwụkwọ nke asaa na nke ikpeazụ, ihe dị ọbụna mgbagwoju anya maka ndị edemede HBO, bụ ndị na-etu ọnụ mgbe niile na saga akwụkwọ na usoro telivishọn nwere onwe ha kpamkpam, nke anyị na-ekwenyebeghị.
Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-echere ndị egwuregwu Game nke n'ocheeze niile, ma ka anyị hụ oge ọhụụ ma gụọ akwụkwọ ọhụrụ ahụ, nke, n'ezie, nwere ike ịbịaru ọkwa nke ọkwa.
Ogologo oge anyị ga-adị ndụ ịnụ ụtọ oge ọhụụ nke Egwuregwu n'ocheeze yiri ogologo oge?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » HBO kwadoro ụbọchị nke oge ọhụụ nke Egwuregwu nke n'ocheeze na ọnụ ọgụgụ nke isi
The OnePlus 3 EuroTour rutere Spain na ụbọchị abụọ
Busgbọ ala Mercedes na-arụ ọrụ ugbu a na Netherlands